María Dueñas: akwụkwọ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
John Ortiz | | ọtụtụ
Nkebi ahịrịokwu nke María Dueñas.
María Dueñas bụ onye ama ama na-ede akwụkwọ n'asụsụ Spanish na akwụkwọ edemede n'ihi akwụkwọ mbụ ya, akwụkwọ akụkọ ihe mere eme: Oge n'etiti etiti (2009) - n’ime ọrụ ndị kacha ere ahịa n’afọ iri gara aga—. Site na akụkọ a, onye edemede meriri ihe nrite: Ciudad de Cartagena de Novela Histórica (2010) na Cultura (2011), na otu edemede.
Na 2021 a, Dueñas alọghachila na nke ọhụrụ ya: Sira, ihe na-aga n'ihu na mmalite mmalite ya. Ọ na-eme ka ndụ onye na-akwa akwa Sira Quiroga gaa n'ihu, ugbu a ọ torola eto ma nwee echiche ndị ọzọ. Naanị ọnwa ole na ole nke mmalite ya, akwụkwọ akụkọ a bụ ebe mbụ na ndepụta nke kacha ere na Spain na ụwa; n’enweghị mgbagha ọfụma ọhụụ ọhụụ maka onye ọdee akwụkwọ Spain.
1.1 Ọmụmụ ihe na ahụmịhe ọrụ
1.2 Egwuregwu edemede
1.3 Akwụkwọ site na María Dueñas
1.4 Ndụ onwe
2 Nchịkọta akụkọ nke María Dueñas
2.1 Oge N'agbata Seams (2009)
2.2 Ebumnobi Mission (2012)
2.3 Ọnwụ (2015)
2.4 Ughtersmụ nwanyị Captain (2018)
María Dueñas Vinuesa bịara n'ụwa na 1964, n'obodo Puertollano na Spain. N'ime ụmụnne asatọ, ọ bụ ya bụ ọkpara; nne ya: Ana María Vinuesa - onye nkuzi—; na nna ya: onye okwu aku Pablo Dueñas Samper. Onye edemede ekwupụta na ya na ezinụlọ ya nwere ọmalịcha na obi ụtọ nwata, nke ọ gụrụ ọtụtụ ihe na nke, na mgbakwunye, ekele nke ịbụ onye kachasị okenye, ọ bụrụwo onye ndu a mụrụ.
Ọmụmụ ihe na ahụmịhe ọrụ
Ọ gụsịrị akwụkwọ ọmụmụ ọkachamara ya na Mahadum Complutense nke Madrid, ebe gụsịrị akwụkwọ na Bekee Philology; ọrụ nke o mechara mee doctorate. Kụziri klaasị ruo ihe karịrị iri afọ abụọ na Ngalaba Akwụkwọ Ozi nke Mahadum Murcia nakwa n'ọtụtụ ebe agụmakwụkwọ ndị America; ọrụ ọ hapụrụ mgbe ebipụtara akwụkwọ akụkọ mbụ ya.
Na 2009, onye edemede debuted ke akwukwo akwukwo na Oge n'etiti etiti, akwụkwọ ọgụgụ nke mere ka ihe karịrị nde mmadụ iri abụọ na ise gụwa ụwa. Akụkọ a mere ka ndị Spen ghọọ kpakpando; ihe ịga nke ọma gbakwunyere obere oge mgbe nke ahụ gasịrị mmegharị nke a na usoro usoro site na ọwa Poolu 3. A sụgharịrị akwụkwọ ahụ na usoro ihe omume telivishọn n'ọtụtụ asụsụ.
Mgbe o mechara ụzọ mbụ ya, ndị Spanish bipụtara akwụkwọ ọhụrụ ọhụụ kwa afọ atọ, nke o jiworo jikọta ọrụ ya. N'ime ụfọdụ ihe ndị a: Ọnwụ (2015), nke bụ onye ndu n’ire ahịa n’afọ nke mmalite ya. Na mgbakwunye, ọ na-emegharị n'ime usoro telivishọn site Boomerang igwe onyonyo na ya malitere na 2021 site na nkwanye ugwu Amazon Prime Video.
Akwụkwọ site na María Dueñas
Oge n'etiti etiti (2009)
Echefu Mision (2012)
Ughtersmụ nwanyị Captain (2018)
Onye edemede ahụ lụrụ Manuel Ballesteros - Katidral nke Latịn—; mkpụrụ nke alụmdi na nwunye gị Ha nwere ụmụ abụọ: Jaime na Bárbara. Afọ ole na ole gara aga - n'ihi ọrụ di ya - ha kwagara n'obodo Spanish nke Cartagena, ebe ezinụlọ ugbu a bi.
Nchịkọta akụkọ nke María Dueñas
Sira bụ onye na-eto eto na-eji ejiji, onye, nke ima ohuru juru, gbaa ọsọ si Madrid n'ebe imebiga ihe ókè n'obodo Tangier. MaIme anwansi anaghị adịte aka ọ dịghị ihe dị ka atụrụ anya. N'ihi nke a, juputara na ụgwọ ndị mba ọzọ, ọ kpebiri ịga Tetouan, isi obodo nke nchebe Moroccan. Na gimmicks na shady njikọ, ọ na-emepe nanị atelier; ebe ọ ga-aga ụmụ nwanyị dị mkpa na ihe omimi.
Ihe niile na-eme n'oge oge ọtụtụ esemokwu agha na Europe, ya mere Sira izute ndị mmadụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme. N’etiti ha, onye ozi Franco Juan Luis Beigbeder, Rosalinda Fox ọkaibe na onye isi ọgụgụ isi Bekee Alan Hillgarth. Ha niile ha ga-eduga onye na-eto eto a na-akwa uwe n'okporo ụzọ gbara ọchịchịrị ma dị ize ndụ, na-enwe dị ka facade ụlọ ọrụ ịkwa akwa ya.
Oge n'etiti etiti ...
Prọfesọ Blanca Perea - Mgbe agbahapụsịrị di ya- na-agafe otu n'ime oge kachasị njọ nke ndụ ya. Dị ka naanị ụzọ mgbapụ si na ọnọdụ ya siri ike, ọ ga-anabata ohere iji rụọ ọrụ agụmakwụkwọ na ala America. Nke ahụ bụ otú bịarutere obere Mahadum Santa Cecilia, nke dị na California. Ebe ọhụrụ nwere udo dị jụụ ma na-atọ ụtọ karịa ka ọ ga-eche.
Blanca ga-amalite ọrụ ya: akwụkwọ nke ihe nketa nke onye ọrụ ibe ya na onye obodo ibe Andrés Fontana, onye ndụ ya bụ onye Hispanicist chụgara ya mgbe agha obodo gasịrị. Na nchoputa ga emekota onye bụbu onye na-eso ụzọ Fontana, nke mara mma Daniel carter. Ka ọrụ ahụ na-aga n’ihu, ihe ndị a na-amaghị na ọtụtụ mmetụta agwakọtara ga-eto.
Transzọ a n'etiti oge gara aga nke agha, ndị a dọọrọ n'agha na ihe odide echefu echefu, ga-eme ka a mata azịza ndị na-eju anya nke na-emetụta ugbu a.
[(Oblivion Mission)] [Site ...
Na ọkara nke abụọ nke narị afọ nke XNUMX, onye na-egwuputa ihe Mauro Larrea efunahụla akụ na ụba ya niile, nke o tinyere nnukwu mgbalị ọ tụrụ na Mexico. Jupụta ụgwọ ma na-achọ ibili iji chebe ọdịnihu nke ụmụ ya, tinye obere ihe o nwere na njem Havana bara ọgaranya. N'ebe ahụ, ihe ndabara na mberede ga-eme ka ọ laghachi n'obodo ya, mana oge a ka ọ biri n'obodo Jerez.
Ọnụnọ ọhụrụ nke nwanyị di ya nwụrụ Mauro agaghị adị mfe dịka o chere, ọ ga-ahụ ụfọdụ ihe mgbochi na ihe o kwenyere bụ mmalite mmeri ọhụrụ. Ọ ga-ezute Soledad Montalvo, nwanyị na-adọrọ mmasị ma lụọ nwanyị, onye ga-eme ka atụmatụ gị niile sie ike. Site n'ebe ahụ, usoro mgbanwe ga - ewere ọnọdụ n’etiti ubi vaịn, mmeri, ọnwụ, agụụ mmekọahụ, nsogbu ezinụlọ na oke obi ike.
N’afọ 1936, Emilio Arenas —Otu onye kwabatara na Spain— dị na New York iji chọọ ndụ ka mma maka ezinụlọ ya, ndị ka na-anọgide na Spain nsogbu. N'oge na-adịghị, malite obere ụlọ oriri na ọ restaurantụ "ụ "El Capitan", nke na-enye ya ohere ịkpọtara nwunye ya Remedios na ụmụ ya ndị nwanyị: Mona, Victoria na Luz. Ha na-enye nne ha ọgụ, ebe ha na-ala azụ ịgbanwe kọntinent; ma ha mechara banye.
Mgbe ọdachi na-atụghị anya ya, ndụ nke ndị ọhụụ ga-agbanwe karịa nkwenye. Daughtersmụ nwanyị Emilio na-enweghị isi Ha ga-elekọta El Capitan,, ka ha na-eche maka otu ihe na-atọ ụtọ. Mụ agbọghọ ndị a ga-etolite ma lụọ ọgụ maka ihe nketa ezinụlọ, nke oke ọgba aghara gbara gburugburu. Asụsụ na nsogbu ego ga-abụ akụkụ ya, mana obi ike ha ga-akarị akarị.
Daughtersmụ ndị isi Captain ...
Ha gara aga Agha Worldwa nke Abụọ, ihe niile Europe na-amalite ịlọ ụwa Dị ka nnụnnụ fenix na, n'akụkụ ya, Sira Bonnard, bụ́ onye ọ na-agụ agụụ ibi ndụ ọhụrụ, nke udo ga-adị na ya. Ma, ọ dịghị ihe ga-adị mfe ahụNa mberede, eziokwu ya gbanwere ọzọ, a manyere ya ịlụ ọgụ kpụ ọkụ n'ọnụ maka ọdịnihu dị mma. Agaghị emetụta ọsọ ya, ebe ọ bụ na ọ bụ nwanyị nwere obi ike, nwee obi ike ma nọgidesie ike.
Maka ọrụ, Sira ga-aga ọtụtụ mpaghara, dị ka: Palestine, England na Morocco. Ahụmahụ ọhụrụ ya ga - eme ka ọ banye na aha ndị akara ngosi, ndị ga - emetụta ya ozugbo. Na ụzọ gị zute akụkụ nke ndị ọkachamara n'oge ahụ, dị ka Eva Perón na Bárbara Hutton. Oge dị iche maka Sira, juputara na nkwa dị ukwuu, nke ọ na-ewere n'echeghị echiche ya.
SIRA (Ndị edemede Spanish ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » María Dueñas: akwụkwọ